Marriott Signs Deal With Yoma Land to Bring Westin Brand to Myanmar | Myanmar Business Today
Home MMBIZ News Marriott Signs Deal With Yoma Land to Bring Westin Brand to...
Marriott Signs Deal With Yoma Land to Bring Westin Brand to Myanmar
Marriott International announced the signing ofalandmark agreement with Myanmar’s leading property developer, Yoma Land, to bring the Westin brand to Myanmar in late 2021. Under the agreement, the newly built Westin Yangon will feature 281 rooms and suites alongside 90 premium serviced apartments with views overlooking downtown Yangon.
The hotel is expected to offeracurated array of dining experiences at Seasonal Taste, the all-day dining outlet, two specialty restaurants, as well as the lobby lounge, pool bar and rooftop bar. The business community can expect to enjoy four ultra-modern meeting rooms,aboard room and 2,470 square meters of conference and event space.
The Westin Yangon is located near the city’s attractions, including Sule Pagoda, Chinatown, Merchant Street and historical central business district. The area is located approximately 18 kilometers from Yangon International Airport. Currently, Westin has more than 220 hotels in nearly 40 countries and territories.
MARRIOTT INTERNATIONAL နှင့် YOMA LAND တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးကို မဏ္ဍိုင်ထားသည့် WESTIN အမှတ်တံဆိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သဘောတူညီမှုအရ အသစ်ဆောက်လုပ်မည့် Westin Yangon တွင် ဟိုတယ်ခန်းနှင့် Suites အခန်းပေါင်း ၂၈၁ ခန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပါ ငှားရမ်းနိုင်သော လူနေအိမ်ခန်းပေါင်း (၉၀) ပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး အထပ်ပေါင်း ၂၆ ထပ်ပါရှိမည့် ဟိုတယ်သည် အဖက်ဖက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေသော Yoma Central စီမံကိန်းတွင်ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။
Yoma Land ၏ ဒေသဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု နှင့် မဟာဗျူဟာ အမြော်အမြင်ရှိမှုတို့သည် Westin အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ပင်ဖြစ်သည်။ The Westin Yangon အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် Marriott International မှ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုအတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူလိုက်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး Yoma Land နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရန်ကို အထူးပင်မျှော်လင့်မိပါကြောင်း Marriott International, Asia Pacific ၏ Chief Development Officer ဖြစ်သူ Paul Foskey က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကိုလိုနီခေတ် အထင်ကရ အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည့် ယခင်မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ် အဆောက်အအုံဟောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးချိန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Yoma Central ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ပြီးဆုံးချိန်တွင် Yoma Central တွင် အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံ လူနေအိမ်ခန်းများ နှင့် Grade A ရုံးခန်းတာဝါနှစ်လုံးတို့ ပါရှိမည်ဖြစ်ကာ ထိုအဆောက်အအုံများကို ဈေးဝယ်စင်တာဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားမည်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုကို နှစ်ခြိုက်သည့် စီးပွားရေးနှင့် အပျော်ခရီးသွားသူများအတွက် Westin Yangon သည် အထူးသင့်လျော်သည့် နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာရှိ အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်များနှင့် တွဲဖက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းမှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် အားဖြည့်ခြင်းသည် Yoma Land အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်သည်” ဟု Yoma Land ၏ ဦးဆောင်သူ Stephen Purvis က ပြောကြားခဲ့သည်။
Previous articleOffshore Fishing Boats Required to Install VMS by December
Next articleApple Starts Selling Locally Assembled iPhone XR in India